Ahafahan’ny Ray Amandreny Miresaka Momba ny Fanondranan’Olona Ity Klasikan-Tsarimiaina Okrainiana Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2016 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Swahili, اردو, Français, Italiano, bahasa Indonesia, عربي, Ελληνικά, Esperanto , English
Pikantsary avy amin'ny “Ahoana ny fanavotan'ny Kazaka ny fofombadin-dry zareo” (1973).
Fatotra ‘nentin-drazana’ [fr] any Maoritania; famarotam-behivavy ankaterena [mg] any Eoropa; ary fakana ankeriny izay halaina ho vady any Kyrgyzstan. Araka ny filaharana napetraky ny Global Slavery, dia tombanana ho 45,8 tapitrisa ny isan'ny olona mety iharan'ny endrika fanandevozana any amin'ny firenena 167 amin'ity taona 2016 ity.
Na dia mbola mangeja antsika aza ny fanandevozana, dia mbola ankavitsiana no iresahana fanondranan'olona na fanandevozana ampahibemaso, ary mbola ankavitsiana kokoa izany resaka izany no avantana amin'ny ankizy.
Fa misy ampahan-tantara an-tsarimiaina Okrainiana iray efa taloha efa tamin'ny taona 1973 nandrava ny fadin-dresaka momba ny fanondranana olona. Ary ankehitriny noho ny YouTube, efa ho tapaky ny taonjato iray taty aoriana, nanao tampody fohy ny “Ahoana no anavotan'ny Kazaka ny fofombadin-dry zareo” (Как казаки невест выручали), avy amin'ny andian-tantara “Ahoana no … Kazaka..”. Efa nahazo mpijery an-tapitrisany ilay ampahan-tantara tokana avy amin'ireny andian-tantara ireny, navoakan'ny tranonkala mpamoaka lahatsary mivantana iray.
Efa nihoatra ny in-dimy hetsy ny isan'ny nijery ny ampahan-tantara momba ny fanondranan'olona ary nampifandringotra fahanhoan-kevitra ara-pmba sy ara-piarahamonina raha entina hanombohan-dresaka amin'ny resaka midadasiky ny fakana olona an-keriny sy ny fanandevozana.
Somary lavalava mihoatra ny 17 minitra ity ampahan-tantara ity, saingy mendrika ny handanianao ny fotoananao, noho ny fahaizan'ny tale Vladimir Dahno mampiaraka ny teknikam-pampiainana sary amin'ny fomba fitantarana mampihomehy sy hira tsara dia tsara. Ity ampahan-tantara ity dia manaraka Kazaka telo manenjika andiam-piraty mpaka ankeriny zatovovavy any amin'ny firenen-tsamihafa, ary ahitana fomba famantarana ihomehezana an'i Gresy, Ejipta ary India. Araka izay vitsy indrindra ny fampiasana fifampiresahana, ka mahatonga ny ampahan-tantara ho mety amin'ny mpijery manerantany amin'ny sokajin-taona rehetra.
Raha tianao ity ampahan-tantara ity dia mety te-hanamarina ny lisitra avy amin'ny UA Post ity ianao : Sarimiaina Okrainiana 10 hahatonga ny zanakao ho kinga kokoa.